यिनै हुन् संसारकै सबै भन्दा सुन्दर युवती, किन पर्छ पहिलो नजर तस्बिरमा ? (फोटो फिचर) – Khabartime
यिनै हुन् संसारकै सबै भन्दा सुन्दर युवती, किन पर्छ पहिलो नजर तस्बिरमा ? (फोटो फिचर)
१८ माघ २०७४, बिहीबार २३:५७ 445 पटक हेरिएको
एजेन्सी। इन्टरनेटमा अहिले एक महिलाको फोटो भाईरल भएको छ । हरेक वेव साईटमा उनकै सुन्दरताको चर्चा छ । फेसबुकबाट लिएर ट्विटरसम्म मानिसहरुले उनकै फोटोहरु शेयर गरेका छन् । धरै मानिसहरु उनलाई उमानका सुल्तान क्बुस बिन सहिदको छोरा वा नातीको श्रीमती बताउदछन् ।
अन्य केहि अाकर्षक अनुहार सहित
श्रृङ्खला पछि मिस युनिभर्समा
को हुन् २० बर्षिय